DEG DEG: Nabaddoon caan ah oo Caawa lagu Dilay Kismaayo + Magaciisa | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Nabaddoon caan ah oo Caawa lagu Dilay Kismaayo + Magaciisa
DEG DEG: Nabaddoon caan ah oo Caawa lagu Dilay Kismaayo + Magaciisa
Nabadoon Siciid Ciise Adoon
Kismaayo (Halqaran.com) – Wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay mid ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee ugu caansan magaaladaasi.
Nabadoon Siciid Ciise Adoon ayaa waxaa caawa lagu dilay halka loo yaqaano Sarta Calaaca ee xaafadda Calanley, kaddib markii ay toogasho ku dileen rag bastoolado ku hubeysnaa.
Ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska Jubbaland ayaa daqiiqado ka dib goobtaasi gaaray, xilli ay baxsadeen raggii dilka gaystay, oo sida la sheegay wejiyada soo qarsaday.
Ciidamada Jubbaland oo hawlgal ka sameeyay halka uu falku ka dhacay ayaa waxaan illaa iyo hadda jirin cid la sheegay in ay dilkaasi u soo qabteen.
Waxay kaloo wararka ay intaasi ku darayaan in Nabadoon Siciid Ciise Adoon uu ku geeriyooday goobtii lagu dilay, iyadoona meydkiisa loo qaaday isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay masuuliyadda dilkiisa, sidoo kalena waxaan jirin wax war ah oo Maamulka Jubbaland uu ka soo saaray tallaabada lagu dilay Nabadoon Adoon, oo sidoo kale ka mid ahaa ganacsatada Kismaayo.
Mid ka mid ah ehellada nabaddoonka caawa la dilay oo lagu magacaabo Daahir Faarax ayaa sheegay in aanay garanayn sababta rasmiga ah ee keentay in la dilo, balse ay u maleynayan in loo dilay, isagoo ka mid ahaa Salaadiintii Arbacadii Magaalada Kismaayo kula kulmay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni.
Ugu dambeyn, Nabaddoon Adoon ayaa xilligaa loo magacaabay inuu noqdo wakiilka Puntland ku metelaya xafiiska urur siyaasadeed ay Puntland damacsan tahay in ay ka furto Magaalada Kismaayo.
Nabadoon Siciid Ciise Adoon caawa la dilay